China Magetsi junction bhokisi uye kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Magetsi mabhokisi emagetsianoshandiswa zvakanyanya kufambisa uye kugovera simba uye kutaurirana. Idzo hombe zvikamu zvejunction bhokisi goko uye chifukidziro zvakanyanya epurasitiki inogadzirwa nejekiseni kuumbwa.
Magetsi mabhokisi emagetsi anoshandiswa zvakanyanya kufambisa uye kugovera simba uye kutaurirana. Idzo hombe zvikamu zvejunction bhokisi goko uye chifukidziro zvakanyanya epurasitiki inogadzirwa nejekiseni kuumbwa. Iyo junction bhokisi inoda kuteedzera yakasimba sisitimu yekuita mwero, saka isu tichaunza iyo yemagetsi junction bhokisi uye kuumbwa pano.
Chii chinonzi plastiki junction bhokisi?
Magetsi junction bhokisi inonzi zvakare yekubatanidza bhokisi, terminal bhokisi, yemagetsi yekubatanidza, terminal base.
Magetsi junction bhokisi chivharo chemumba kubatana kwemagetsi, kuchengetedza kubatana uye nekupa chengetedzo.
Chidiki chesimbi kana epurasitiki junction bhokisi rinogona kuita chikamu chemagetsi kombi kana thermoplastic-sheathed tambo (TPS) wiring system muchivako.
Kana yakagadzirirwa kukwirisa kwepamusoro, inoshandiswa zvakanyanya mumatanda, pasi pevhu kana yakavanzwa kuseri kwepaneru yekuwanira - kunyanya muzvivakwa zvemumba kana zvekutengesa. Rudzi rwakakodzera (senge rwuratidzwa kuruboshwe) runogona kuvigwa mupurasita remadziro (kunyange hazvo kuvanda kusingatenderwe nemitemo yazvino nemaitiro) kana kukandwa mukongiri - nekavha chete ichioneka.
Mapurasitiki emagetsi mabhokisi ane avo akawedzera uye mashoma. Nekuti iwo epurasitiki, hapana chikonzero chekubatanidza waya yepasi kwairi. Sezvo inogadzirwa neisina-kuitisa zvinhu, switch uye zvitoro hazvigone kupfupika kana zvikabata parutivi rwebhokisi.
Mapurasitiki mabhokisi anowanzo kuuya aine akadhinda sikuru maburi ekuti nyore kubatanidzwa kweswitch uye zvitoro. Aya mabhokisi anouya mune imwechete-genji, maviri-gang, uye kunyangwe akawanda-echikwata masisitimu.
Mhando dzemagetsi junction bhokisi
Magetsi mabhokisi emagetsi mabhokisi mhando dzakasiyana: yemukati mhando, yekunze mhando, yakakwira voltage kuramba mhando, uye isina mvura mhando. Zvishandiso uye zvekuchengetedza zvinodiwa zvinosiyana kubva munzvimbo dzakasiyana nenyika. Naizvozvo jekiseni muforoma nekuumba kugadzira zvakare akasiyana.
1. yemukati yemagetsi junction bhokisi.
Resin mhando: ABS, PVC
Mazhinji eaya emahofisi uye emumba wiring mabhokisi. Iyo inoshandiswa yekugovanisa simba remukati uye yepakati kutonga, pamwe ne-on-off magetsi, uye yekutaurirana mutsara kuwana uye kutonga. Iyo yakawanda inoshanda voltage iri pazasi mazana maviri nemazana mashanu. Iyo epurasitiki nebwe inodiwa kutevedzera murazvo retardant giredhi UL94 V1 ~ V0.
2. panze magetsi junction bhokisi.
Resin mhando: ABS, ABS / PC
Kunze junction bhokisi kunodiwa kuti ukwanise kumira wekunze wakadzika uye wakadzika tembiricha uye kunaya kwemvura uye chezuva kuchembera ngura, chigadzirwa chigadzirwa chisina mvura, anti-ultraviolet radiation kuchembera, kujairira kumusoro uye kwakadzika tembiricha nharaunda. Izvo zvinodikanwa kushandisa epamusoro mapurasitiki, akadai sePC kana nylon, aine akakosha ekuwedzera ane akanakisa ultraviolet kuramba uye yakakwirira uye yakaderera tembiricha kuita.
3. Industrial junction bhokisi.
Mhando dzemhando: ABS, ABS / PC, Nylon
Industrial junction bhokisi, kazhinji ine yakasarudzika mashandiro anodikanwa, senge dimensional kurongeka uye kugadzikana, oiri uye alkali kuramba, kupfeka kuramba. Zvigadzirwa zvepurasitiki zvinofanirwa kusarudzwa pane zvakasiyana zvinodiwa uye kujeka kweforoma kunofanira kutsanangurwa.
4. high voltage kuramba magetsi junction bhokisi.
Iyo junction bhokisi inonyanya kushandiswa kune yakakwira voltage nharaunda, senge magetsi makabati, emagetsi mabhokisi ekudzora, zvigadzirwa zvekuparadzira. Kuputira kwakanaka uye anti-kukwegura zvivakwa zvinodiwa. Nylon nemamwe mapurasitiki einjiniya anowanzo sarudzwa.
5. Basa guru reiyo photovoltaic module junction bhokisi ndeyekubatanidza uye kuchengetedza iro rezuva photovoltaic module, kuitisa izvozvi zvinogadzirwa neiyo photovoltaic module. Sechinhu chakakosha chezuva rema cell module, junction bhokisi re photovoltaic module chigadzirwa chakazara chinosanganisa dhizaini yemagetsi, dhizaini dhizaini uye kushandisa kwesimba. Inopa vashandisi pamwe yakasangana yekubatanidza scheme yezuva photovoltaic module.
6. Bhokisi remvura risinganetsi mvura.
Mhando dzemhando: ABS, ABS / PC, PPO
Pane zviyero zviviri zvekudzivirira mvura.
A. Pfupi yekunze kupenya, kureva kuti mvura haizodururwa yakanangana nechigadzirwa.
B. Chigadzirwa chinonyudzwa mumvura.
Zvinodikanwa zvisina mvura zvinowanzoenderana neyakaumbwa zvikamu zvepurasitiki, senge:
Nyorera mhete yekuisa chisimbiso pajoinhi kana kuvhura;
Ultrasound kutenderera kwemajoini maviri:
Chinokosha jekiseni Kuumbwa.
Mvura isina kusangana bhokisi
Kunze kwepurasitiki junction bhokisi
Indoor mwenje junction bhokisi
Tee mapurasitiki junction bhokisi
Kazhinji kushandiswa kwepurasitiki junction bhokisi
Nylon epurasitiki junction bhokisi
Zvinodiwa pakushandiswa kwemabhokisi emagetsi emagetsi
Mabhokisi emagetsi emagetsi anowirirana zvakanyanya nemagetsi uye anofanirwa kuteedzana nechengetedzo kana zvinodiwa, kunyanya:
1. Mamiriro ekunze anopikisa: kuramba kumusoro uye kwakadzika tembiricha, hunyoro
2. Kuisa Magetsi
3. Kuramba kune yakakwira voltage, dielectric kugara uye dielectric kurasikirwa: Inogona kushanda yakakwira voltage kana yakaderera, yepakati uye yakakwira frequency magetsi munda.
4. Kupisa kupisa: kupisa kunogadzirwa nezvikamu zvemukati kunogona kuburitswa nekukurumidza.
5. Flame retardant: Hazvisi nyore kubatidza uye kukonzera moto.
6. Anti-ultraviolet radiation: Kana bhokisi remagetsi riri muchiedza chakasimba kana nharaunda yekunze, haizove kuchembera uye kutadza nekuda kweiyo ultraviolet radiation.
7. Corrosion resistance: Muasidhi, alkali uye munyu nharaunda, haizokanganisa uye kukuvadza, uye inogona kushanda kwenguva yakareba.
8. Kuiswa chisimbiso uye kusavhara mvura: inokwanisa kushanda munzvimbo nyoro kana yemvura
9. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Onai kuti zvinhu zvinoshandiswa zvaburitsa zvinhu zvine chepfu kana utsi kana zvatsva kana kupisa, zvinova zvinokuvadza hutano hwevanhu.
Dhizaini Kufungisisa kweMagetsi Ekubatanidza Bhokisi
1. Kusarudzwa kwezvinhu: Parizvino, minda mikuru yekushandisa yemvura isina junction bhokisi zvigadzirwa zvine yakaoma nzvimbo yekuvaka nenzvimbo yakavhurika. Iko kushomeka kwesimba, kusimba kwemutoro simba, kuputira chivakwa, * isiri-chepfu, * kukwegura kuramba, ngura kuramba uye murazvo kudzora kwezvinhu kunofanirwa kutariswa kana uchifunga nezvekuchengetedza kwekuita kwezvigadzirwa. (Isiri-chepfu kuita kwave kunetsekana zvakanyanya, kunyanya nekuti kana isingaite mvura junction bhokisi zvigadzirwa mune yemoto, kupisa hakuzoburitse zvine muchetura uye zvinokuvadza magasi, kazhinji muchiitiko chemoto nekuda kwekufemerwa kweiyo yakawanda nhamba ine chepfu magasi uye rufu rwakaverengeka ruzhinji.
2. Dhizaini dhizaini: Kufungisisa kunofanirwa kupihwa kune iyo yakazara simba, runako, kugadziriswa kuri nyore, kumisikidza kuiswa uye kudzokororazve kwemabhokisi emvura asinganetsi mvura. Parizvino, isina mvura junction bhokisi zvigadzirwa zvinogadzirwa neakakura epasirese vagadziri haana chero simbi zvikamu, izvo zvinogona kurerutsa chigadzirwa kupora maitiro. Nekudaro, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa nevazhinji vagadziri vemumba zvakasiyana, uye anti-waxy zvivakwa zvezvinhu zvakashata. Kazhinji, kuiswa kwendarira kunoiswa mune yekumisikidza sisitimu isina mvura junction bhokisi kuti iwedzere simba rekumisikidza, iro rinozowedzera nguva uye mutengo wekugadzirisa zvinhu. Matambudziko akadaro anogona kugadziriswa nekusarudza mbishi zvigadzirwa neakakwira mashandiro ekuratidzira anopihwa nevagadziri venguva dzose.
3. Ukobvu hweMadziro: Kazhinji, kana uchifunga nezve mutengo wese wechigadzirwa, ukobvu hwechigadzirwa chinofanira kudzikiswa zvakanyanya sezvinobvira kusangana nekushomeka kwekukakavara uye kuramba waxy kwechigadzirwa. Mukugadzirwa kwemabhokisi emunyika emvura asina mvura, ukobvu hwesvingo hweABS nePC zvigadzirwa zvinowanzo pakati pe2,5 ne3,5 mm, girazi faibha rakasimbiswa polyester rinowanzo pakati pe5 ne6.5 mm, uye ukobvu hwemadziro efa-yakakanda aruminiyamu zvinhu zvinowanzo pakati 5 uye 6.5 mm. Iri pakati pe2,5 ne 6. Kukora kwemadziro kwakakosha kunofanirwa kugadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvekumisikidza zvezvakawanda zvezvinhu uye zvishongedzo.
4. Kuisa chisimbiso mhete yezvinhu kusarudzwa: Kune isina mvura junction bhokisi zvigadzirwa, inowanzo shandiswa yekuisa chisimbiso mhete zvinhu ndeaya: PUR, EPDM, Neoprene, Silicon. Iyo tembiricha renji, kusagadzikana kusagadzikana, kuwedzera kuwedzera, kuomarara, kuwanda, compression ratio uye kemikari kuramba inofanirwa kutariswa pakusarudza sealant mhete.
5. Yakagadziriswa isina mvura yekubatanidza yekuvhara screw zvinhu: Kana isina mvura isina junction bhokisi chivharo uye hwaro zvabatanidzwa, chinhu chakakosha chikamu ibhaudhi. Kusarudzwa kwezvinhu zvebhaudhi zvakare kwakakosha kwazvo. Iyo inowanzo shandiswa zvinhu ndeye PA (nylon) kana PA chiwanikwa, uye isina simbi yekukora screw inogona kushandiswa. Structural simba rinofanira kutariswa mukugadzirwa kwepamusoro sikuruu. Nekuti vashandisi vakasiyana vanoshandisa nzira dzakasiyana uye vanosangana zvakasiyana zvinodikanwa, senge kuiswa kweemagetsi screwdriver uye yekuisa manyore, torque simba re screw rinofanira kutariswa mukugadzirwa.
Magetsi junction bhokisi chakuvhuvhu uye kuumbwa
Idzo huru zvikamu zvejunction bhokisi imba yepurasitiki uye kavha. Izvo zvinogadzirwa nenzira yejekiseni repurasitiki. Icho chishandiso jekiseni muforoma.
Dhizaini yeiyo junction bhokisi jekiseni muforoma zvinoenderana nedhisheni dhizaini uye kuburitsa kwejunction bhokisi, iyo inosarudza chimiro dhizaini yeforoma uye mhango dhizaini.
Iyo simbi uye kuomarara kweforoma inoisa kunoenderana nepurasitiki resin charactor, iko iko kugadzirwa kwechigadzirwa uye hupenyu hwakananga hweiyo yakaumbwa. Simbi P20 inowanzo shandiswa seyakaumbwa muwedzero zvinhu zvenguva dzose maodha, uye S136 inoshandiswawo pakakwirira gloss pamusoro. Kune makuru maodha ezvigadzirwa, yakawanda mhango mhango inodiwa kuwedzera kugona kwekugadzira.
Junction bhokisi epurasitiki jekiseni muforoma
Mestech yakaunganidza ruzivo rwakapfuma rwekugadzira chakuvhuvhu uye jekiseni kugadzirwa kwemabhokisi ejunction evatengi vazhinji. Kana iwe uine kudiwa kwezvikamu zvepurasitiki mubhokisi rejunction, ndapota taura nesu.
Pashure: Zvikamu zvepurasitiki zvemvura yekuchenesa
Zvadaro: Mapepa epurasitiki etambo netambo